Wasiirka Dalxiiska Jamaica ayaa Tacsi u diray Qoyska St. Ann Hotelier
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Wasiirka Dalxiiska Jamaica ayaa Tacsi u diray Qoyska St. Ann Hotelier
Jebinta Wararka Caalamka • Caribbean • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • News • Dadka • Dalxiiska • Wararka kala duwan
Wasiirka Dalxiiska Jamaica, Mudane. Edmund Bartlett, ayaa tacsi u diray eheladii iyo asxaabtii hoteelka St. Ann, Richard Salm, oo ku dhintay shil baabuur shalay ka dhacay waddada weyn ee Llandovery ee St. Ann.
Salm wuxuu ahaa milkiilaha Club Caribbean Hotel ee Runaway Bay, iyo agaasimaha maamulka Drax Hall Estate, sidoo kale St. Ann.
Sannadkii 1994 -kii isaga iyo xaaskiisa, waxay Glen Preparatory School ku aasaaseen gadaashooda Salem, iyagoo kafaala qaaday carruurta shaqaalaha hoteelkiisa.
Waxaa lagu aqoonsaday kaalintii uu ka qaatay horumarinta qaranka ee 2019 xafladda Sharafta iyo Abaalmarinta Qaranka ee Guriga King.
“Aad baan uga xumaaday inaan ka war helay geeridii naxdinta lahayd ee Mr. Richard Salm. Waxaan weli uga mahadcelineynaa go'aankiisii ​​ahaa inuu Jamaica ka dhigo hoygiisa oo ay ka sii muhiimsan tahay inuu noloshiisa badan u huray u adeegidda dadka Jamaica iyada oo loo marayo dalxiiska iyo horumarinta bulshada. Runtii wuxuu ahaa nin ku xeel dheer warshadaha iyo qof aad u wanaagsan, ”ayuu yiri Bartlett.
“Anigoo ku hadlaya magaca Dowladda iyo dadka Jamaica, oo ay ku jiraan dhammaanteenna dalxiiska dalxiiska, waxaan jeclaan lahaa inaan u fidinno naxariis iyo taageero dhab ah qoyska iyo saaxiibbada Mudane Salm. Rabbi ha ku siiyo raaxo inta lagu jiro waqtigan murugada oo naftiisu nabad ha ku nasato, ”ayuu raaciyay.
Salm wuxuu ahaa milkiilaha Club Caribbean Hotel ee Runaway Bay, iyo agaasimaha maamulka Drax Hall Estate, sidoo kale St. Ann. Waxa kale oo uu horseeday horumarinta Ironshore ee Montego Bay, oo leh koorso golf-18-god ah.
Sannadkii 1994 -kii isaga iyo xaaskiisa, waxay Glen Preparatory School ku aasaaseen gadaashooda Salem, iyagoo kafaala qaaday carruurta xubnaha shaqaalaha hotel. Dugsiga ayaa tan iyo markaas la ballaariyay oo hadda wuxuu ku yaal Discovery Bay, St. Ann.
Waxaa lagu aqoonsaday kaalintii uu ka qaatay horumarinta qaranka ee 2019 xafladii Sharafta iyo Abaalmarinta Qaranka ee Guriga King, halkaas oo lagu abaalmariyay Amarka Kala -soocidda Darajada Taliyaha (CD) ee adeegga dalxiiska, Horumarinta Isboortiga Jiilaalka, iyo Horumarinta Bulshada .